Ezigbo Ego Roulette saịtị - Casino Bonus Codes
Online cha cha Daashi Codes > Real Money ruleti Sites
Real Money ruleti Sites
(564 votes, nkezi: 5.00 si 5)
Loading ... ezigbo ego ruleti a na-egwuri egwu n'ime ọtụtụ casinos nke ala n'ụwa, ọ bụ ezie na ọnụ ụlọ dị na egwuregwu ahụ dị iche site n'otu casino ruo na-esote. N'ebe a na-egwu egwu, mpaghara ndị a na-emekarị ka ụwa dị iche iche, ọ bụ ezie na ụfọdụ obodo ma ọ bụ ógbè nwere ike inye ohere kachasị mma. Ihe ị kwesịrị ịmara na enwere nghọtahie dị iche iche na nsogbu ị na-enweta, ya mere nụ ihe isi ọ bụla nke roulette na-enye gị. N'ime isiokwu a, Aga m atụle gị nhọrọ ndị dị mkpa. Ozugbo agwụchara, ị kwesịrị ịma ihe niile ị chọrọ ịma iji mee mkpebi dị mma.
List of Top 10 ruleti Sites
American & Germany ruleti
European roulette bụ ụdị nke egwuregwu a ma ama site na casinos na Monte Carlo na Principality of Monaco na French Riviera. N'agbanyeghị nghọta ndị nkịtị, ọkpụkpụ ndị Europe na-enweghị otu abụghị ụdị mbụ nke egwuregwu ahụ. Ndị na-egwu egwuregwu na Europe na etiti narị afọ 19th malitere ịme egwuregwu efu otu onye iji dina ndị ahịa, na-agbagha ọdịnala nke narị afọ abụọ nke ịgba egwu roulette abụọ-efu. Inwe otu oghere oghere ma ọ bụ akpa n'akpa ụkwụ bụ uru dị ukwuu nye onye ịgba chaa chaa, n'ihi na ọtụtụ ndị nọ n'ụgbọelu ahụ bụ ndị na-efu mgbe bọl ahụ kwụsịrị na otu n'ime 0 akpa. N'ihi nke a, 2.70% ọnụ ụlọ bụ European roulette dị mma karịa nke American version of the game.
American ruleti adọtara nke ọma dị ka ụdị mbụ nke egwuregwu ahụ dịka a na-akpọ ya na 17th na 18th narị afọ. E wezụga akpa ego maka nọmba 1 site na 36, wiil ahụ na-agụnye oghere 0 na 00. Ọzọkwa, ịgbakwunye akpa n'akpa a na-ala n'iyi na-eweda gị nkwụsị nke mmeri. Nkwụ ụlọ bụ 5.26% na American ma ọ bụ las Vegas roulette, nke a na-akpọkwa okpukpu abụọ-roulette. N'ọtụtụ ọnọdụ, ị ga-achọ izere egwuregwu a, ọ bụrụ na o kwere mee. N'oge ụfọdụ, ị nwere ike ịchọta iwu ndị na-eme ka echiche a kwụsị. Mgbe ị na-ejighị n'aka, kpọọ eji wheel Europe.
Play Real Money ruleti
Mgbe ị na-egwu ezigbo ego roulette na chaa chaa bricks, ị ga-achọpụta na ọ bụ ọtụtụ ebe dị na North America ka a na-akpọ American roulette. America, mgbe egwuregwu Euro na-egwuri n'ebe ọ bụla n'ụwa. Ụfọdụ casinos Las Vegas na-enye otu roulette na-enwe naanị otu efu na ebe a na-ahọrọ ebe ha na-egwu egwu n'oge ụfọdụ n'izu, mgbe mgbe, dịka egwuregwu nnukwu dollar na obere bets nke $ 25 ma ọ bụ karịa. Akpukpo a nke Vegas Strip casinos na-enye oge $ 15 European roulette, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịga na oge ụfọdụ kwa izu iji kpọọ egwuregwu. Ndị mmadụ ejirila ntanetị nke Tunica, ndị casinos Mississippi nyero egwuregwu efu naanị n'oge gara aga, ma nke ahụ apụtaghị na ọ bụ ugbu a.
Na Atlantic City, iwu New Jersey na-eme ka casinos nye iwu dị iche iche na American roulette. A na-akpọ iwu ndị a "la partage", nke bụ French maka "nke akụkụ" ma ọ bụ (na American parlance) "na akụkụ". Ihe iwu a na-ekwu bụ na ị na-ahapụ ọkara ọkara gị mgbe ị na-akwụ ụgwọ ego ọbụla na bọl ahụ na-aga na oghere 0 ma ọ bụ 00. Ya mere, ọ bụrụ na i mere $ 20 ụgwọ na hi / lo, red / black, ma ọ bụ ọbụna / ụda nkwa na bọl na-adabere na zeroes, nanị ị ga-efu $ 10. Nke a na-emechi ọnụ ụlọ na ego nkwụnye ego na 2.63%, nke na-eme ka mbipute a nke American roulette dị ubé dị mma karịa European roulette. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ n'ime casinos Boardwalk ugbu a na-enye "Rapid Roulette", nke na-enye otu iwu dị mma (ya mere iwu ndị New Jersey), ma na-egwu ngwa ngwa karịa egwuregwu ahụ. Dịka ị nwere ike ịkọwa, nke a na-ekpuchi gị na ọnụ ụlọ dị ugboro ugboro kwa elekere, si otú ahụ na-amụba uru ego nke cha cha kwa awa.
Roulette bụ otu n'ime egwuregwu kọmputa ndị a na-enye na casinos na ọnọdụ ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, na-ekwu dị ka Colorado, Connecticut, Georgia, Idaho, na Illinois nwere casinos nke na-enye egwuregwu ahụ. (N'ihe banyere Georgia, ị na-elegharị anya ụgbọ oloko karịa ígwè brin na mortar.) Florida na-enye egwuregwu egwuregwu roulette, ma n'ihi iwu obodo, a naghị ekwe ka ha kpọọ ya.
Online ruleti Real Money
Mgbe ị na-egwuri egwu n'ịntanetị maka ezigbo ego n'Ịntanet, ị ga-ahụkarị njikọ ụgbọelu na ndị Europe na roulette n'akụkụ-n'akụkụ. Nhọrọ nke egwuregwu ị ga-egwu bụ ihe doro anya (kpọọ egwuregwu Euro), ọ gwụla ma ịchọtara na cha cha nwere iwu a kapịrị ọnụ bụ ndị na-eme amara USA egwuregwu. Ọtụtụ mgbe, onye ọrụ na-enye ndị ọrụ egwuregwu ahụ nhọrọ, na-enwe olileanya na ndị na-agba chaa chaa America na ndị Canada na-egwu ọdịdị US nke egwuregwu ahụ, na-eche na ọ ka mma. N'adịghị ka ụlọ ịgba chaa chaa ndụ, onye ọrụ ahụ agaghị arụ ọrụ ọzọ iji merie egwuregwu ndị a, n'ihi ya ọ bụ obere maọbụ ọ dịghị ego (dabere na ngwanrọ) iji nye nhọrọ nhọrọ ọzọ.
Ọzọ, ọ bụrụ na i nwere nhọrọ nke abụọ na ị maghị ihe iwu ndị ahụ bụ, kpọọ egwuregwu Europe nke egwuregwu ahụ. Ohere bụ, ọ bụ nhọrọ ka mma. Ekwesịrị m ịkọwa ụgbọelu Europe maka ezigbo ego nke na-enye iwu "la sharing" (ma ọ̄ bụ "mkpọrọ" / agbụ mkpọrọ) bụ ụdị kacha mma i nwere ike igwu egwu. Nke a na-eme ka ọnụ ụlọ dị ala ruo 1.35%, nke dị na egwuregwu dị ka craps na baccarat. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụdị mbipute a pụrụ iche nwere ụfọdụ egwu kachasị maka egwuregwu ọ bụla n'Ịntanet nke na-enweghị usoro ihe ọ bụla. Baccarat, craps, na roulette na-enwekarị obere atụmatụ ịcheta (na-enweghị ike ịma ihe nkwụsị ime), n'ihi ya, ha na-enye nsogbu kachasị mma n'ebughị ụzọ na-amụ ma na-agba nkọ mgbe ịgba chaa chaa.
Ruleti Wagers - Inside nzo
Nbanye dị n'ime ya bụ ndị e mere na ọnụ ọgụgụ di ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị nta nke nọmba ejiri. A na-akpọ ha n'ime ụlọ n'ihi na ị na-etinye ego ibe gị n'ime nhazi nọmba. Ụzọ nzo na-agụnye otu ọnụ ọgụgụ, ị ga-etinye mgbawa gị ozugbo na ọnụ ọgụgụ ahụ. A na-ekefe ọnụ ụzọ maka nọmba 2, ma tinye ya na akara nkewapụ nọmba abụọ ahụ. A na-eme nzeti okporo ámá na nọmba 3 n'usoro, dịka 1-2-3 ma ọ bụ 4-5-6. Ị ga-etinye nzọ a n'èzí nke nọmba ahụ nke na-amalite usoro a, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ dị na obere ụzọ, ha na-akpọ ya n'okporo ámá.
Ịga n'ihu na ndepụta nke ụlọ dị n'ime, nkuku ma ọ bụ quad nzọ gụnyere nọmba 4. Ọnụ ọgụgụ anọ a ga-agbatị, na-ahapụ gị ka ịdebe ibe gị ebe nkuku anọ ga-agbakọta ọnụ. Ihe ntaneti bụ 5 nọmba nọmba na American roulette, ọ gụnyere 0, 00, 1, 2, na 3. Emela ka ọkpụkpụ bọtịnụ, n'ihi na o nwere nsogbu kasị njọ na egwuregwu ahụ; ọ nwere ọnụ ụlọ 7.89%. N'ikpeazụ, n'okporo ámá abụọ ma ọ bụ ụzọ ntanye gụnyere ụzọ abụọ n'okporo ámá n'okporo ámá n'otu oge. Ị ga-etinye ibe gị na eriri dị n'agbata n'okporo ámá abụọ ahụ, ọzọ na-esote n'èzí nke usoro ọnụọgụ.
Ruleti Wagers - N'èzí nzo
Ọ bụrụ na n'ime ụlọ na-agụnye 6 ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ na-abaghị uru, nkwụsị azụ na-agụnye ịkụ nzọ na 12 ma ọ bụ karịa nọmba na oge. I nwere ike ikwu na egwu a dị na ụdị ọnụọgụgụ. Ebe ọ bụ na a na-akwụ ụgwọ ndị ọzọ, ohere ịnweta mmeri ndị a dị ukwuu karịa na ọkụkọ dị n'ime, ọ bụ ezie na ọnụahịa ndị dị ntakịrị. Buru n'obi na (ma ọ bụghị igbe ntinye), ndị ọkwọ ụgbọala niile nwere otu ihe ahụ, ọ gwụla ma ị na-eji iwu pụrụ iche. Ịkụ nzọ na "iri na abụọ" gụnyere ịkụ ma ọ bụ na 1 site na 12, 13 site na 24, ma ọ bụ 25 site na 36. Ịnye ego nkwụnye ego gụnyere ịkụ nzọ na ihe dị elu / ala, ihe na-acha uhie uhie / oji, ma ọ bụ ihe na-adịghị mma. Ha na-akpọ ndị a ọbụna ego ka ha na-akwụ ụgwọ na 1: 1, kama buru n'uche na ị nweghị 50% ohere ịkụ ha, n'ihi ọnụnọ nke oghere 0 na wiil.
Kọlụm nzo bụ 12-nọmba nzo na otu nke atọ dị iche iche nke nọmba. The nọmba layout gụnyere 3 ogidi 36 nọmba, otú onye ọ bụla na kọlụm na nwere 12 nọmba ya. Ka ihe atụ, otu kọlụm na-agụnye nọmba 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34. Ị na-edebe ndị a wagers na ala nke ọ bụla na kọlụm na. N'ikpeazụ, ị nwere ike ime ka agwọ Wager na a serpentine ụkpụrụ nke nọmba nke crisscross okirikiri nhọrọ ukwuu. The nọmba gụnyere bụ 1-5-9-12-14-16-19-23-27-30-32-34. Ọ bụ ezie na ị ga na-anụ ndị na-akpọ nke a a ọkpọ nzọ, n'ihi na ị na-nanị ịkụ nzọ a otu unit na onye ọ bụla nke nọmba ndị a ka ị ga-ma, ọ na-adịghị eru definition, n'ihi na emegide-anọgide otu a Wager.
Online ruleti maka Real Money
N'ebe ọ bụla ịntanetị ị ga-ahụ online, a na-enye ndị nke ọ bụla n'ime ha na ngwanrọ software ha. Nhọrọ nke dị n'etiti ma ọ bụ n'èzí ga-enwe ọtụtụ ihe ị ga-eme na ugboro ole ị chọrọ imeri na ego ole ị na-akwụ mgbe ị na-eme ya. Ọ bụrụ na ị na-agwụ ike na-eche ọtụtụ nkwụsị iji merie nzọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-egwu ndị na-ahụ n'èzí. Ọ bụrụ na ịchọta ya na-atọ ụtọ inwe nnukwu ego, mgbe ahụ, ị ​​ga-egwu ndị na-arụ ọrụ n'ime. E wezụga igbe ntanye, ndị ọgbọ niile nwere otu ụlọ ahụ, ya mere atụla anya ịchọta ụzọ dị mma ịhọrọ nke ị ga-esi nwalee.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele nlele gị site n'ọnọdụ ọzọ, ị nwere ike ịsị onwe gị na ụlọ ahụ nwere njedebe gị, ọ ga-enwekwu ohere ma ọ bụghị ihe gbasara ya. Na nke a, ọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịbanye n'ime ụlọ, ebe ọ bụ na ị nwere ike imeri 35: 1 payout na 20th spin (dịka ọmụmaatụ) wee pụọ na mma payout. Ọ bụrụ na ị na-egwu maka 1: 1 na 2: Ntanye 1, ị na-eche ihu ọnụ ụlọ ọtụtụ ugboro. N'ezie, ịtụkwasị ndị na-arụ ọrụ n'ime ya pụtara na ị ga-enwe ọtụtụ nnọkọ ebe ị ga-enwe ụyọkọ nke nkwụ ma ọ nweghị ihe ọ bụla iji gosipụta maka ịgba egwu gị, n'ihi na ọ bụghị ajụjụ maka iji 50 gaa na 100 na-ewere ọnọdụ n'emeghị otu nọmba mgbe ọ na-akụtu. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ nọmba ị na-aga, ị ga-atụfu ụtụ ego.
Ihe ndị a dị n'elu adịghị emetụta mgbe ị na-egwu egwu na iwu ndị a na-ekwu na ụlọnga ma ọ bụ mkpọrọ, n'ihi na ebe a na-eme ka ọnụ ụlọ ahụ ghara ịdị na-akwụ ụgwọ ego, ma ọ bụ naanị ego nkwụnye ego. Ọ bụrụ na ị na-egwu na iwu ndị a ma ọ bụ Europe ma ọ bụ American ezigbo ego roulette, ọ bụ ihe ka mma ime mgbe niile ọbụna ego-bets na-acha uhie uhie / nwa, elu / ala, ma ọ bụ ọbụna / odd.
0.1 List of Top 10 ruleti Sites
2.2 Play Real Money ruleti
2.3 Online ruleti Real Money
2.4 Ruleti Wagers - Inside nzo
2.5 Ruleti Wagers - N'èzí nzo
2.6 Online ruleti maka Real Money